Ungawana Sei uye Sarudza Yakanaka Kudonhedza Vanopa? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweKudonhedza Kosi
Ungawana Sei uye Sarudza Yakanaka Kudonhedza Vanopa?
Kuwana vatengesi chaivo ndechimwe chezvinhu zvakakosha kutanga bhizimusi rekudonha. Vatengesi vanoenderana nechetatu bato, senge vatengesi, vatengesi, uye vanogovera, vanobata kuzadzikiswa kwemirairo yekutengesa. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti mhando uye kuvimbika kwese kwekudonhedza vatengesi kunotyora kudonhedza eCommerce chitoro. Semutengesi akaipa anogona kuparadza kushanda nesimba uye kuvimbika kwawakawana, wakanaka unowanza kukosha kwechitoro chako. Chinyorwa chino chichaunza izvo zvakanaka vatengesi, maitiro ekuwana vanodonhedza vanotengesa, uye zvekutarisa kana uchisarudza vanodonhedza vanotengesa.
Ndezvipi Zvakanakira Vatengesi
Vatengesi vakanaka vanowanzove nehunhu hwakawanda, sekutaura kunotevera.
1. Akazvitsaurira nyanzvi tsigiraVamiririri
Vatengesi vakanaka vane vamiririri vane ruzivo vanoziva vanoziva iyo indasitiri uye yavo mitsara yechigadzirwa. Uye ivo vanofanirwa kukupa iwe wega mutengesi mumiriri anoona nezve kukuchengeta iwe uye chero nyaya dzauinacho panguva.
2. Akadyarwa muTekinoroji
Tekinoroji ine mabhenefiti mazhinji uye vakanaka vanopa rubatsiro vanozviziva uye voisa mari mairi zvakanyanya kubatsira uye kurerutsa bhizinesi. Zvimiro senge chaicho-chenguva hesheni, yakazara online dhairekitori, inogadziriswa yedatha feeds, uye online inotsvaga yekuodha nhoroondo inogona kukubatsira iwe kugadzirisa mashandiro ako.
3. Yakarongeka uye Inoshanda
Vatengesi vakanaka vane vashandi vane hunyanzvi uye masisitimu makuru anokonzeresa mukushanda uye kazhinji kuzadzikiswa-kusina kuzadzika. Nekudaro, pasina chaiko kurishandisa, zvakaoma kuziva kuti unogonesa sei mutengesi. Kana iwe ukaisa odha, iwe unogona kutarisisa mhando yemhando yebasa, nguva dzekuendesa, kurongedza, uye mimwe mibvunzo inoenderana neyevatengesi, kusanganisira zvinotevera zvinhu:
Maitiro avanobata iwo marongero
Nhanho inotumirwa nezvinhu zvacho
Iko kumhanyisa kwavanotevera nekutevera ruzivo uye invoice
Iko kunaka kwepakeji basa kana chinhu chasvika
Maitiro Ekutsvaga Kudonhedza Vanopa
1. Bata Mugadziri
Bata mugadziri iyi iri nyore nzira yekuwana zviri pamutemo vatengesi vazhinji. Iwe unogona kufonera inotungamira inogadzira zvigadzirwa izvo iwe zvaunoda kutengesa uye kukumbira runyorwa rweavo vatengesi vazhinji. Ipapo iwe unogona kubata aya ekutengesa zvizere kuti uone kana vachidonha uye wobvunza nezve kumisikidza account.
2. Shandisa Google Search
Zviripachena kuti iwe unogona kushandisa google kutsvaga kuwana vakanaka vanopa. Nekudaro, iwe zvirinani utsvage zvakanyanya nekuda kwechikonzero chekuti vanogona kunge vakaipa pakushambadzira nekusimudzira. Uye iwe unofanirwa kushandisa akakosha mazwi ekutsvaga, senge "muparidzi", "mutengesi", "hombe", "imba yekuchengetera", uye "mutengesi". Uyezve, usatonga newebhusaiti. Mamwe mawebhusaiti ane mashoma dhizaini anogona kunge akanaka vatengesi zvakare.
3. Enda kune Yekutengesa Show
Iyo inzira inoshanda yekuziva uye nekubatana nevanogadzira uye vanotengesa mumusika. Kana mamiriro ezvinhu achibvumidza, iwe unogona kuenda kune yekushambadzira show uye kuita vanobatana pamwe nekutsvagisa zvigadzirwa zvako nevatengesi vese munzvimbo imwechete. Panogona kunge paine zvitsva uye zviri kuuya zvigadzirwa iwe zvaunogona kuwedzera kune yako inodonhedza chitoro.
Zano: Tarisa iyo Trade Show News Network kuti uone kuti riini uye kupi zviratidzwa zvirikuitika.
4. Joinha Indaneti Networks uye Mapoka
Maindasitiri network uye mapoka zvimwe zviwanikwa zvinobudirira kuwana vatengesi. Vanhu vanobatana nemaindasitiri network uye mapoka vanosarudza kugovana, kudzidza, uye kukura. Unogona kuwana nzwisiso yakakosha kubva kwavari mushure mekujoinha uye kuita chikamu chenharaunda inodonhedza. Uye iwe unowana mazano pamusoro pevari nani vatengesi kana vatengesi kuti urege
5. Tsvaga Directories
Dhairekitori revatengesi idhesheni rakabhadharwa revatengesi rakarongedzwa nemusika, niche kana chigadzirwa. Iyi inzira iri nyore yekutsvaga uye kuongorora huwandu hukuru hwevanopa munzvimbo imwechete nekukurumidza uye vakanakira kufunga mazano pamusoro pezvigadzirwa zvekutengesa kana niches yekupinda. Inonyanya kuzivikanwa yekutengesa uye kudonhedza kutumira vatengesi madhairekitori pamusoro pewebhu anosanganisira World Wide Brands, Doba, Wholesale Central, nezvimwe.
6. Nzvimbo Raira Kubva Mukukwikwidza
Iwe unogona kutsvaga anodonhedza mukwikwidzi woisa diki diki kuchitoro. Google kero yekudzoka kuti uone kuti ndiani wekutanga kutumirwa aive nekukurumidza kana iwe uchinge wagamuchira iyo pasuru. Mune zvimwe zviitiko, ichave iri mutengesi iwe yaunogona kubata.
Chii Chaunofunga Nezvekusarudza Vanopa
1. Ive Nehanya Nevanopa Fake
Pane nzira mbiri dzekusiyanisa vatengesi venhema. Imwe ndeyekuti vatengesi havangambotengesa zvigadzirwa nemitengo yakawanda kune veruzhinji. Chimwe ndechekuti vane ruzivo uye vane mukurumbira vatengesi havadi kuti vangangoita vadyidzani kubhadhara mari yemwedzi wega kungowana zvigadzirwa zvavo. Kana iwe ukasangana nevatengesi vane hunhu hwakapesana, iwe unofanirwa kuziva kuti vanogona kunge vari venhema vatengesi.
2. Tarisa Matches
Ita shuwa kuti tsika dzako dzinoenderana newaunofambidzana navo kuti uve nekambani iri nani. Unogona kutsvaga mutambo maererano nemabhizimusi tsika, sei uye nei vatengesi vachiita bhizinesi, zvinangwa zvavo zviripi, vasvika sei pano, zvichingodaro.
Kuziva mutengesi wako mumunhu itsika yakanaka kwazvo. Kana vatengesi vako varipedyo, unogona kusvika pakuzviziva zviri nyore. Kana kana vatengesi vako vari kure asi bhizinesi riri kushanda mushe, funga nezve kutora rwendo kuti uzive kuri kugadzirwa zvigadzirwa zvako.
Kana mutengesi wako ari iyeye seari kupa mamwe mabhizimusi e-commerce mune yako niche, zvichave zvakaoma kuzvitsaura iwe nekumisikidza rako bhizinesi 'brand.
Kudonhedza hukama hwehunyanzvi umo mune zvibvumirano zvinoverengeka zvinoda kusimudzirwa. Zvirinani kusaisa bhizinesi rako 'kuvimbika kumunhu wekutanga uyo anokupa iwe chipo.
Kubata nguva kwakakosha nekuda kwechikonzero chekuti kune hukama nekutakura. Nguva dzekutumira dzinofanira kusimbiswa uye kusangana.
7. Order Samples yeVimbiso
Izvo zvakakosha kuodha sampuli yekusimbiswa kuti uone zvimwe zvakakosha nezve mutengesi. Unogona kuwana ruzivo rwechigadzirwa iwe pachako uye uone kuti mutengesi anobata sei kuzadzikiswa izvo zvinokupa chiratidzo chezvinozoonekwa nevatengi vako. Teerera kune zvakadzama, zvakaita sekutakura kwekutakura kwakafanana, kungave kwakaparadzaniswa muparidzi, uye kuti kutumira nekutakura kunotora nguva yakareba sei.
Tags cj kudonhedza, cjdropship, cjdropshipping, dropshipping, kudonhedza mumiriri, kudonhedza vamiririri, kudonhedza niche, kudonhedza mupi, kudonhedza vatengesi, maitiro ekuwana mutengesi wekudonhedza, shopu kudonhedza, USA kudonhedza mupi, woocommerce kudonhedza
← Maitiro Ekuita neYakareba Kutumira Nguva Kana Kudonhedza? → Ungatanga Sei Kudonhedza Bhizinesi muPhilippines